SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Qariiradaha marinka | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesSR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada JidkQariiradaha marinka
SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Qariiradaha marinka
Sawiradaan waxay muujinayaan qaybaha marinka SR 900 ee daraasada lagu wado.
57th Avenue South ilaa 60th Avenue South
Sawirkaan wuxuu muujinayaa muuqaalka sare ee aaga marinka SR 900 ee u dhaxeeya 57th Avenue South io kaliya qaybta bari ee wadada 60th Avenue South. Wadada SR 900 waxay leedahay laba wadiiqo oo labada jihaba aada, waxaana geeska lagu lugeeyo leh geeska waqooyin ee wadada.
Isgoyska South 129th Street
Muuqaalkaan dusha sare ee marinka SR 900 wuxuu muujinayaa isgoyska ku yaala wadada South 129th Street, taasoo leh calaamada taraafiga. Labada jihaba, SR 900 waxay ku leedahay laba wadiiqo oo dheer, wadiiqada dhanka bidix, iyo wadiiqada dhanka midig. Waxaa ku yaala meelaha wadada laga gooyo sadexda jihaba, marinnada geeska wadada, iyo labada astaan bas.
South 129th Street ilaa South 133rd Street
Muuqaalkaan dusha sare wuxuu muujinayaa qaybta 50 MPH ee marinka SR 900, bariga wadada South 129th Street ilaa South 133rd Street. Qaybtaan waxay leedahay laba wadiiqo oo labada jihaba aada, mana lahan meelaha dadku ku socdaan labada dhan ba ee wadada.
South 133rd Street ilaa South 135th Street
Sawirkaan waa dusha sare wuxuu muujinayaa marinka SR 900 oo u dhaxeeya South 133rd Street ilaa South 135th Street. Isgoyska wadada 68th Avenue South, waxaa ku yaala calaamada taraafiga iyo laba meelood oo wadada laga gooyo. Marinka Bari, SR 900waxay leedahay laba wadiiqo oo toos ah iyo hal wadiiqe oo dhanka midig u leexda. Marinka Galbeed, SR 900waxay leedahay laba wadiiqo oo toos ah iyo hal wadiiqe oo dhanka bidix u leexda. Waxaa jiro wadiiqada u leexata dhanka midig oo galaysa Dabaqyada Creston Point, iyo sidoo kale wadiiqada bartamaha looga leexdo. Marinnada lagu lugeeyo ee geeska wadada ayaa ku yaala dhanka koonfureed ee wadada u dhaxaysa 68th Avenue South iyo marka waxyar la dhaafo astaanka baska.
Guji batoonka “Next” si aad u aragto xaaladaha jira ee wadada.